महिला लघुवित्ताकाे आइपीओमा कति पर्याे आवेदन ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyमहिला लघुवित्ताकाे आइपीओमा कति पर्याे आवेदन ?
महिला लघुवित्ताकाे आइपीओमा कति पर्याे आवेदन ?
महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपीओमा १ अर्ब ८५ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परको छ । बिक्री प्रबन्धक एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङका अनुसार सोमबार साँझ ५ बजेसम्ममा १२ लाख १ हजार ८९० जनाले १ करोड ८५ लाख ३५ हजार १०० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । यो सर्वसाधारको लागि बिक्री खुला गरिएको कुल ३ लाख ७५ हजार कित्तालाई आधार मान्दा ४९.४२ गुणा बढी आवेदन हो ।
महिला लघुवित्तले माघ ३० गतेबाट ४ लाख कित्ता आइपीओ बिक्री खुला भएको छ । कुल खुला गरिएको मध्ये ०.५% (५ हजार कित्ता) कम्पनीका कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको छ भने ५% (२० हजार कित्ता) सेयर म्युचुअल फन्डलाई बाँडफाँट गरिएको छ । बाँकी ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
यसमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । महिला लघुवित्तको आइपीओ फागुन ४ गतेसम्म भर्न सकिनेछ । लगानीकर्ताले सी–आस्वाको माध्यमबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यो आइपीओमा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङले बिक्री प्रबन्धकको काम गरेको छ ।
Previous articleमहाधिबेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गरेर आउने चुनावमा एकढिक्का बनाएर जानुपर्छ:महामन्त्री कोइराला
Next articleग्रीनलाइफ हाइड्रोपावरको आइपीओ शुक्रबार बाँडफाँड हुदैँ, ७५ प्रतिशतकाे हात खाली हुने